नेपाल`गन्जमा कोरोना संक्र`मित ७ वर्षीया छोरीका बाबु भन्छन्-‘छोरी रोइर`हन्छे, म सुन्‍`नै सक्दिनँ’!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाल`गन्जमा कोरोना संक्र`मित ७ वर्षीया छोरीका बाबु भन्छन्-‘छोरी रोइर`हन्छे, म सुन्‍`नै सक्दिनँ’!!
नेपालगन्ज — बाँकेको खजुरा गाउँ`पालिका स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसो`लेसनमा सात व`या बालिका`देखि ६० वर्ष उमेरका संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । सात वर्षीयाका बाबु पनि संक्रमित छन् । उनी पनि आइसो`लेसनमै छन् ।
आफ्नी सानी छोरीसँग छु`ट्टिएर अलग्गै बस्नुको पीडा यसरी सुनाए :
आइतबार थ्रोट स्वाब परी`क्षण गर्दा म र मेरी सात व`र्षीया छोरीमा कोरोना संक्र`मण पुष्टि भयो । त्यसपछि हामी १५ जनालाई राति साढे १० बजेतिर एउटै एम्बुलेन्समा राखेर यहाँ ल्याइयो । त्यतिबेलासम्म छोरी मेरो काखमै थिई । ‘बाबा हामी कहाँ जाने ?’ उसले सोधिरहेकी थिई । मैले केही उत्तर दिन सकिरहेको थिइनँ । ऊ अझै डराइरहेकी छ ।
अस्प`तालमा ल्याएपछि छोरीलाई र मलाई फरक कोठामा राखियो । छोरीले औंला छोड्न माने`की थिइनँ । ऊ रुँदै कोठाभित्र गई । एउटै भवनमा विपरीत दिशाका कोठामा हामीलाई राखिएको छ । उसलाई एउटी महि`लासँग राखिएको छ । छोरीले त्यो कोठाबाट बोलिरहेको, कराइ`रहेको, बाबा, अम्मी भन्दै चिच्या`इरहेको सुन्छु ।
आइतबार राति १२ बजेतिर मलाई बो`लाएकी थिई । छोरीको चि`च्याहट सुनेर रातभरि सुत्न सकिनँ । छोरी चुलबुले स्वभावकी छे । खेल्न, खान, कार्टुन हेर्न मन पराउँछे ।आज सम्म कहिल्यै आमाको काख छोडेर बसेकी छैन । घरमा एक्लै कहिल्यै बसिन । राति मेरो अँगा`लोमा निदाउने बानी थियो ।
अहिले त्यो को`ठामा कसरी बसेकी होला, कोरोनाले भन्दा छोरीको चिन्ताले पिर लागेको छ ।